ပီကေဝါးရင်း မျိုချမိရင် အန္တရာယ်ရှိလား - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon » လူနေမှုပုံစံနှင့် ကျန်းမာရေး » ပီကေဝါးရင်း မျိုချမိရင် အန္တရာယ်ရှိလား
ပီကေစားရင်း မျိုချမိရင် အူမှာကပ်ပြီိး သေတတ်တယ်၊ ပီကေက အစာအိမ်ထဲ၊ အူထဲမှာ ကပ်သွားပြီး လုံးဝပြန်မထွက်တော့ဘူး ဆိုတဲ့ စကားတွေ ငယ်ငယ်က ကြားဖူးမှာပါ။ ဒီလိုစိတ်ပူတတ်တဲ့ လူကြီးတွေက ကိုယ်တွေကို ပီကေမစားရဘူးလို့ တားမြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပီကေဆိုတာ လူကြီးဖြစ်မှ စားရမယ်ဆိုတဲ့အသိလေးလည်း ခေါင်းထဲစွဲလို့။
ခုချိန်ထိ ပီကေမျိုချမိမှာကို အရမ်းကြောက်နေမိတာလည်း အမှန်ပါပဲ။ တကယ်ရော ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ….
ပီကေရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းအများစုက သဘာဝကုန်ကြမ်းတွေမဟုတ်တဲ့အတွက် လူ့အစာအိမ်ထဲမှာ ဒါတွေကိုချေဖျက်နိုင်တဲ့ အင်ဇိုင်းတွေမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာ ပီကေကို အူမကြီးအထိ ရွေ့လျားရောပါသွားပြီး ဝမ်းအညစ်အကြေးတွေနဲ့အတူ စွန့်ထုတ်လိုက်မှာပါ။ အူနံရံမှာကပ်နေမှာတို့၊ တစ်သက်လုံးပြန်မထွက်တော့ဘူးလို့ ကြောက်စရာအတွေးတွေ ဖိစီးနေဖို့ မလိုပါဘူး။
ပီကေကို မျိုချမိပြီးတဲ့အခါ အများအားဖြင့် တစ်ရက်၊နှစ်ရက်၊သုံးရက်လောက်ကြာမှ ပြန်စွန့်ထုတ်လာနိုင်ပေမယ့် သိပ်မကြာတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ လူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့အစာခြေစနစ်အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ ဆိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ယေဘုယျတော့ ရက်ပိုင်းအတွင်းပဲ ကြာနိုင်ပါတယ်။ သီတင်းပတ်လည်းမချီဘူး၊ နှစ်နဲ့လည်းမချီနိုင်ပါဘူး။
ပီကေဆိုတာ မျိုမချဘဲ ဝါးဖို့ပဲ စီမံထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပေမယ့် တစ်ခါတလေတော့ မျိုချမိလည်း အန္တရာယ်မရှိနိုင်ပါဘူး။ ပီကေကို အစာခြေစနစ်က မချေဖျက်နိုင်တာ မှန်ပါတယ်။ သို့သော် ပီကေက အစာအိမ်ထဲမှာ အမြဲကပ်ကျန်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ချေဖျက်ထားတဲ့အစာတွေနဲ့အတူရောပါသွားပြီး စွန့်ထုတ်လိုက်မှာပါ။
ဖြစ်ခဲတဲ့အခြေအနေဆိုပေမယ့် မျိုချထားတဲ့ပီကေက ပမာဏများနေတာနဲ့ ဝမ်းချုပ်ခြင်း ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ ကလေးတွေမှာ အူပိတ်ဆို့တဲ့ ပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဥပမာ ပီကေမျိုချထားမိပြီး သိပ်မကြာခင် ထပ်ကာထပ်ကာမျိုချမိတဲ့ပီကေတွေ စုလာတာမျိုး၊ ကလေးမို့ ထွေးထုတ်ရမှန်းမသိ အမြဲမျိုချနေမိတာမျိုးကို စိုးရိမ်ရတာပါ။
ကလေးတွေအတွက် သတိထားရမယ့် ပီကေရဲ့အန္တရာယ်ကတော့
အချိုကြောင့် သွားပျက်စီးမှာ စိုးရတယ်၊
မျိုချမိရင် ပီကေတွေမှာပါတဲ့ ပါဝင်ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကို စိတ်ပူရတယ် (သူတို့က အစာလမ်းကြောင်းထဲမှာ အချိန်ကြာရင် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိနိုင်မလဲ အတိအကျမသိနိုင်ပါဘူး၊)
ပီကေတွေများပြီး အူလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့တဲ့အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရတယ်။
လူကြီးတွေ မှန်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ ကလေးငယ်ငယ်တွေကို ပီကေမကျွေးသင့်ပါဘူး။ ပီကေဆိုတာ မျိုမချရဘူးလို့ နားလည်တဲ့အရွယ်ကပဲ စပြီး ပီကေစားခွင့်ပေးသင့်ပါတယ်။
ပီကေဝါးတာ ကောင်းလား၊ မကောင်းဘူးလား
Bowel obstruction (အူလမ်းကြောင်းပိတ်ခြင်း)
ဝမ်းချုပ်နေတဲ့အချိန် ဒါတွေစားရင် ပိုဆိုးစေနိုင်တယ်
ပူလွန်းလို့ ပန်ကာဖွင့်အိပ်တာ အန္တရာယ်ရှိလား
အစားတစ်လုတ်ကို ၃၂ ခါဝါးပြီးမှ မျိုချပါ။ သင့်အစာအိမ်ကို ကူညီရာရောက်ပါလိမ့်မယ် ။ ။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇူလိုငျ 15, 2019 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုငျ 15, 2019
Accessed July 15.7.2019.
ပူတဲ့အချိန် ခေါင်းကိုက်တတ်တာ တိုက်ဆိုင်မှုသတ်သတ်ပဲလား။
ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်း (၁၀)ခု
ပွစိပွစိပြောတတ်တာ မကောင်းဘူးလို့ ဘယ်သူပြောလဲ
Gym ကနေကူးစက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကဘာတွေများလဲ
အအိပ်ဆတ်တဲ့သူတွေ ဒါတွေကို သိထားသင့်တယ်နော်